ကဗျာဆရာ အောင်ဘညို့  ၁၀ ဇွန် ၂၀၁၅ မှာ ကွယ်လွန် | MoeMaKa Burmese News & Media
ကဗျာဆရာ အောင်ဘညို့ ၁၀ ဇွန် ၂၀၁၅ မှာ ကွယ်လွန်
(ဓာတ်ပုံ – Lin Way Khat, Facebook)
(မိုးမခ) ဇွန် ၁၀၊ ၂၀၁၅
သူ့အတွက် အမှတ်တရစာတွေ မိတ်ဆွေတွေဆီက ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဆိုတဲ့စကားကို သတိရမိတယ်။ (နောင်ကျော်)
ဒီနေ့ ၉နာရီ၄၅မိနစ်က ကွယ်လွန်သွားကြောင်း
လုပ်သင့်မလုပ်သင့် နားမလည်တဲ့ သေခြင်းတရားဟာ
အောင်ဘညို မင်း မြန်မာပြန်ကမ်းကိုလွန်ပြီး ကိုယ့်ဆီ လာနှုတ်ဆက်ပါဦးတော့လား မောင်မောင်ဇော်ရယ် ….
ကဗျာဆရာအောင်ဘညိုရဲ့ ပင်လယ်ဟာ အော်သံတွေ တလောကလုံးကို တ၀ုန်းဝုန်းရိုက်ကာ မြည်ဟည်းကျန်ရစ်ပေါ့။
ပင်လယ်ဟာ ကလောင်တချောင်းနဲ့ ရသမျှနေရာအကျဥ်းလေးမှာ ခြေစုံရပ်လို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူကြီးရေ …
ကျန်ရစ်သူ မိသားစုနဲ့အတူ ကျန်ရစ်သူ ကဗျာလောကနဲ့အတူ ၀မ်းနည်းပူဆွေးရပါကြောင်း။
REST IN POEM KO AUNG BA NYO.
GOOD BYE (AUNG WAY)
ကိုအောင်ဘညိုမလာနိုင်တော့ပါဘူး ။ (မင်းညွန့်လှိုင်)
ခုတော့ မင်းက ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ လည်ပင်းဖက်ကြီးသလို
မင်းကဗျာတွေဖတ်ရတာ အသက်ရှူကျပ်ပြီး မနေတတ်ဘူး။
သြော်… သြော်… သြော်…
ရနံ့သစ်၊ ၂၀၁၃၊ ဇူလိုင်
One Response to ကဗျာဆရာ အောင်ဘညို့  ၁၀ ဇွန် ၂၀၁၅ မှာ ကွယ်လွန်
cho saint on June 10, 2015 at 3:02 pm
ABnyo , i am missing now.